Chin Paraltha CDF Hna Nih Kawl Ralhrang Minung2An Thah Than Hna - DUHNUNG PAR
Matupi le Mindat kar ah CDF-Matupi nih SAC ralkap2kahthah. October 15 lio Mindat le Matupi kar kahdohnak ah CDF-Matupi nih SAC ralkap2an kahthah hna, CDF lei aa hliam an um lo tiah kan theih.
၁၆ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ (စနေနေ့)
ယခုတစ်ပတ်အတွင်း မတူပီမြို့နယ်တွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီဘက်မှ လက်နက်ကြီး/ငယ် များဖြင့် ရမ်းသမ်း ပစ်ခတ်ခြင်းများနှင့် မတူပီ – မင်းတပ် လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် နယ်မြေရှင်းလင်းရေးများအား တောက်လျှောက် လုပ်ဆောင်လာကြသဖြင့် ​ဒေသခံအများပြည်သူများအ​နေဖြင့် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများဖြစ်​ပွား​နေပါသည်။
ယမန်နေ့ အောက်တိုဘာ(၁၅) ရက်နေ့ ညနေ ၆:၀၀ နာရီခန့်တွင် CDF- Matupi နှင့် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ အဖွဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီဘက်မှ (၂) ဦး ​သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ CDF- Matupi ဘက်မှ ကျဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းများ မရှိခဲ့ပါ။
ယနေ့ အောက်တိုဘာ (၁၆) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီ ခန့်တွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီဘက်မှ လက်နက်ကြီးများ ရမ်းသမ်း ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အသက်(၆) နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် တစ်ဦးနှင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့မှ ထောင်ထားသော မြေမြှုပ်မိုင်း နင်းမိပြီး သက်ကြီးပိုင်း ပြည်သူတစ်ဦး စုစုပေါင်း (၂) ဦး ကြွေလွင့်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် မတူပီ – မင်းတပ်လမ်း ခြန်းပြန်း(ခ)လမ်းကြောင်းတွင် လက်နက်ကြီးကျ၍ ပြည်သူ (၁)ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါသည်။
ပြည်သူများ၏ အသက်ပေး ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု များအတွက် Chinland Defense Force – Matupi မှ အထူးဝမ်းနည်း ကြေကွဲကြောင်း တစ်ပါးတည်း ဖော်ပြလိုပါသည်။
ဒေသအတွင်း တိုက်ပွဲသတင်းများနဲ့ ပက်သက်ပြီး Chinland Defense Force – Matupi ၏ ထုတ်ပြန်ချက်သတင်းသာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။
Chinland Defense Force – Matupi
Total views : 2014065